कृषि – Nepali online news portal
वीरगञ्ज । रासायनिक मल युरियाविना धान रोपेका पर्साका किसान गहुँ याममा सो मल पाएपछि हर्षित भएका छन् । साउनदेखि युरिया मलको अभाव हुँदा गहुँ खेती प्रभावित भएपछि यहाँका किसान निराश भए पनि केही दिनयता युरिया मल आउन थालेपछि यहाँका किसानलाई गहुँ खेती गर्न सहज भएको छ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी […]
१७ मंसिर २०७७, बुधबार १०:२१ December 2, 2020 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
इलाम– बेँसी र चुरे क्षेत्रका किसानलाई यतिबेला अलैँचीको चटारोले छोपेको छ । अलैँचीको सिजन शुरु भएकाले टिप्ने र छोडाउने कामको चटारो परेको हो । मौसम नबिग्रिएको (पानी नपरेका) ले अहिले अलैँची टिप्न उपयुक्त भएको किसानको भनाइ छ । गएका वर्षामा यो सिजनमा पानी परेकाले अलैँची कुहियो । तर, यो वर्ष घाम लागेकाले समस्या छैन । […]
११ भाद्र २०७७, बिहीबार ०८:५८ August 27, 2020 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
इलाम– “चियाको बारेमा त बोल्न पनि मन लाग्दैन । गाडीका गाडी भारततर्फ चिया जान्छ कोही देख्दैन”, चिया उद्योगी तथा प्रदेश नं १ का सांसद काजीमान कागतेले फोनमार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिए । कागतेले शुरुमै भने, “यो चिया कसरी जाँदैछ ? प्रशासनले के हेरेर बसेको छ ? स्थानीय तह किन बोल्दैन”, कागतेले आफ्ना कुरा राखे र सम्पर्क […]
६ भाद्र २०७७, शनिबार १८:२१ August 22, 2020 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
रौतहट– सरकारी अनुदानको रसायनिक मल नपाइएपछि रौतहटका किसान भारतीय मलमाथि निर्भर हुनुपर्ने वाध्यता छ । खुल्ला सिमानाका कारण घोडासान, चैनपुर, बरगिनीया, छौडादानो र आधापुरलगायत भारतीय बजारबाट किसानले रसायनिक मल ल्याएर खेतमा छर्नुपर्ने वाध्यता रहेको किसानको भनाइ छ । “कृषि सामग्री केन्द्रमा मल नआउँदा सीमावर्ती भारतीय बजारबाट जेनतेन गरेर मल ल्याएर धान खेतमा छरेँ”, रौतहट वौधीमाई […]
२६ श्रावण २०७७, सोमबार १९:३८ August 10, 2020 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
अझै पूरा भएन चियाको ‘अक्सन’
इलाम– छ वर्षअघि निर्माण शुरु भएको नेपाली चियाको लिलाम बिक्री केन्द्र (अक्सन सेन्टर) अझै पूरा भएको छैन । क्रेतालाई नेपालमै भित्र्याएर चिया बेच्ने उद्देश्यले अक्सन मार्केट खोल्न शुरु भए पनि अझै निर्माण पूरा भएको छैन । अक्सनमार्फत स्थानीय बजारबाटै चिया बेच्नका लागि अक्सन निर्माण गर्न खोजिएको हो । हालसम्म निर्माण पूरा नहुँदा क्रेताले सबै चिया […]
२६ श्रावण २०७७, सोमबार ०९:०२ August 10, 2020 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
विराटनगर– प्रदेश नं १ मा यस वर्ष अहिलेसम्ममा ९३ दशमलव ९५ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको कृषि विकास निर्देशनालय विराटनगरले जनाएको छ । गतवर्र्ष ५६ दशमलव ७४ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको थियो भने यस वर्षको लगातार मनसुनको प्रभाव, सिँचाइको सुविधाजस्ता कारणले रोपाइँको क्षेत्र निकै बढेको निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयका अन्ुार उच्च पहाडी क्षेत्र ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा […]
२१ श्रावण २०७७, बुधबार १९:०१ August 5, 2020 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
इलाम– भनिन्छ, एकतामा बल हुन्छ । यसमा पनि श्रम गरेर खानेलाई त एकता हुन जरुरी नै हुन्छ । अधिकारका लागि लड्न श्रमिक एकजुट हुन आवश्यक हो तर, चिया क्षेत्रका श्रमिक भने अझै सङ्गठित हुन सकेका छैनन् । अधिकांश श्रमिक सङ्गठित नहुनुको कारण आफ्नै उद्योग हो । श्रमिक सङ्गठित हुँदा तोकिएको ज्याला दिनुपर्ने, सेवासुविधा बढाउनु पर्ने […]
९ श्रावण २०७७, शुक्रबार १६:२३ August 4, 2020 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
काठमाडौँ । सरकारले कृषिमा सहकारी, करार र आधुनिक खेतीमार्फत निजी क्षेत्रको लगानीमा उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले आगामी आवका लागि रु ४१ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी १० वर्षभित्र कृषिको दिगो विकास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजनाअघि सारिएको छ । आव २०७७/७८ मा सरकारको आम्दानी र खर्चको […]
१५ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १५:०२ August 4, 2020 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)
रामपुर । वर्षेनी मह बेचेर राम्रो कमाइ गर्ने पाल्पा बगनासकाली गाउँपालिका– ८ बस्ने पशुपति बस्यालले यस पटक भने बन्दाबन्दीका कारण मह बिक्री गर्न गर्न पाएका छैनन् । उत्पादित करीब पाँच सय किलो मह फार्ममा नै रोकिएपछि कहिले बन्दाबन्दी खुल्छ भन्ने चिन्ताले उनलाई सताएको छ । हिमाली बी कन्स्ट्रक्सन फार्म दर्ता गरी विसं २०५२ देखि बस्यालले […]
१० जेष्ठ २०७७, शनिबार १२:४२ August 4, 2020 पाथिभरा संवाददाता	Comment(0)